မွေးနေ့မှာ လက်ဦးဆရာ ဂျွန်လွင်ကို အိမ်တိုင်ရာရောက်သွားပြီး ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့တဲ့ "မာယာလှည့်ကွက်" မင်းသား မင်းဘုန်းမြတ် - Cele Connections
မွေးနေ့မှာ လက်ဦးဆရာ ဂျွန်လွင်ကို အိမ်တိုင်ရာရောက်သွားပြီး ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့တဲ့ “မာယာလှည့်ကွက်” မင်းသား မင်းဘုန်းမြတ်
bilie | 09/10/2020 | Celebrity | No Comments
လက်ရှိ MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ “မာယာလှည့်ကွက်” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသားချော မင်းဘုန်းမြတ်ကို တော်တော်များများ သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့ကတော့ မင်းဘုန်းမြတ်ရဲ့ အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းဘုန်းမြတ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်စပြုနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပီပီ မွေးနေ့မှာ ကျေးဇူးရှိသူ ဆရာသမားများကို ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့သလို သူ့ကို အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဦးဆရာ ဂျွန်လွင်ကိုလည်း ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီနေ့ MRTV-4 က “မာယာလှည့်ကွက်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းမှ ခေါင်းဆောင်မင်းသား၊ Stars & Models Int’l မှ မွေးထုတ်ထားတဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် မင်းဘုန်းမြတ်က သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကို ဘုရားပန်း၊ ပန်းသီးစိမ်းတွေနဲ့ လာကန်တော့ပါတယ်။ Happy Birthday per MinPhone Myat ရေ . . . အခုလို တကူးတက လာပို့ပေးတဲ့အတွက်လည်း ဒီနှစ်မွေးနေ့ကစလို့ ချစ်သူအသစ်ရှာတွေ့ပြီး မိသားစုကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်တဲ့ သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။” ဆိုပြီး မွေးနေ့ရှင် တပည့်လေး မင်းဘုန်းမြတ်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
ဂျွန်လွင်ကတော့ သူ့ရဲ့ အေဂျင်စီကနေ မွေးထုတ်ပေးထားတဲ့ သားတပည့်ရဲ့ ကျေးဇူးသိတတ်ပုံကို ဝမ်းသာနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးရှင် ဆရာသမားကို မမေ့လျော့တဲ့ မင်းဘုန်းမြတ်လည်း မွေးနေ့ကစ ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို ဆွတ်ခူးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: John Lwin’s fb
မှေးနမှေ့ာ လကျဦးဆရာ ဂြှနျလှငျကို အိမျတိုငျရာရောကျသှားပွီး ဂါရဝပွုကနျတော့ခဲ့တဲ့ “မာယာလှညျ့ကှကျ” မငျးသား မငျးဘုနျးမွတျ
လကျရှိ MRTV-4 ရုပျသံလိုငျးမှာ ထုတျလှငျ့ပွသနတေဲ့ “မာယာလှညျ့ကှကျ” ဇာတျလမျးတှဲထဲက မငျးသားခြော မငျးဘုနျးမွတျကို တျောတျောမြားမြား သတိထားမိကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဒီကနေ့ အောကျတိုဘာလ (၉) ရကျနကေ့တော့ မငျးဘုနျးမွတျရဲ့ အသကျ (၂၃) နှဈပွညျ့ မှေးနလေ့ေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ မငျးဘုနျးမွတျကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျစပွုနတေဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျပီပီ မှေးနမှေ့ာ ကြေးဇူးရှိသူ ဆရာသမားမြားကို ဂါရဝပွုကနျတော့ခဲ့သလို သူ့ကို အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါတငျပေးခဲ့တဲ့ လကျဦးဆရာ ဂြှနျလှငျကိုလညျး ဂါရဝပွုကနျတော့ခဲ့ပါတယျ။
“ဒီနေ့ MRTV-4 က “မာယာလှညျ့ကှကျ” ရုပျသံဇာတျလမျးမှ ခေါငျးဆောငျမငျးသား၊ Stars & Models Int’l မှ မှေးထုတျထားတဲ့ အဆိုတျော သရုပျဆောငျ မငျးဘုနျးမွတျက သူ့ရဲ့မှေးနကေို့ ဘုရားပနျး၊ ပနျးသီးစိမျးတှနေဲ့ လာကနျတော့ပါတယျ။ Happy Birthday per MinPhone Myat ရေ . . . အခုလို တကူးတက လာပို့ပေးတဲ့အတှကျလညျး ဒီနှဈမှေးနကေ့စလို့ ခဈြသူအသဈရှာတှပွေီ့း မိသားစုကိုလုပျကြှေးပွုစုနိုငျတဲ့ သားကောငျးတဈယောကျဖွဈပါစေ။” ဆိုပွီး မှေးနရှေ့ငျ တပညျ့လေး မငျးဘုနျးမွတျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားပါတယျ။
ဂြှနျလှငျကတော့ သူ့ရဲ့ အဂေငျြစီကနေ မှေးထုတျပေးထားတဲ့ သားတပညျ့ရဲ့ ကြေးဇူးသိတတျပုံကို ဝမျးသာနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြေးဇူးရှငျ ဆရာသမားကို မမလြေ့ော့တဲ့ မငျးဘုနျးမွတျလညျး မှေးနကေ့စ ဒီထကျမက အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာကို ဆှတျခူးရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ပရိသတ်တွေ အကြီးအကျယ်စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ “လမ်းဘေးကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်” ဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်များ
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရေးမှူးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အနူးအညွတ် ပြန်လည်တောင်းပန်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မိခင်ရဲ့ တာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် အောက်မေးရိုးမပါလာတဲ့သားလေးကို အထူးကုပါရဂူကြီးနဲ့ ပြသပြီး လူကောင်းပကတိဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပေးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ